Chii chinonzi bhuruu machipisi? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi bhuruu machipisi?
Bhuruu machipisi nderimwe remapoka akakosha pamusika wemasheya uye anomiririra makambani ane huremu hwakakwirisa mumakesi emasheya. Nekuti kana tichitaura nezve iri rinosarudzika boka isu tiri kutaura nezve hapana chisingasviki pane nyeredzi kukosha kwemisika yemari. Maitiro anoratidzwa pamusoro pezvese nekusimba kwavo kwemakambani uye zvakare nekuti ivo vanoratidza a yakakwira mwero wemari. Kusvika padanho rekuti ivo ndivo vanofambisa mazita mazhinji muzvikamu zvese zvekutengesa. Nebhuku rekubvumirana pamusoro pevamwe vese. Kushanda senge poindi yekureva kwechikamu chakanaka chevashoma nevapakati varimi.
Kune ese aya zvikonzero, bhuruu machipisi harisi iro rakakura kwazvo boka remitengo. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinosvika kune akanakisa equity makambani. Mupfungwa iyi, uye nezve index inosarudzika yemusika weSpanish, Ibex 35, machipisi ebhuruu anomiririrwa nemakambani emhasuru yemari BBVA, Banco Santander, Inditex, Telefonica uye Iberdrola. Ndokunge, kuchengetedzeka uko kukosha kwemusika kuri pamusoro uye kunonakidzwa nekuvimba kwechikamu chikuru chevatengesi.
Imwe yemasangano avo akajairika ndeyekuti vane yakakwira vhoriyamu yekutora, pamusoro pevhareji. Zuva rega rega huwandu hwakakwira kwazvo hwezvikamu hunotengwa nekutengeswa uye hapana dambudziko rekuita mashandiro acho. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti panogara paine vatengi uye vatengesi vanozosimbisa mafambiro evatengesi. Iko hakuna matambudziko ekukochekerwa pazvinzvimbo zvavo, sezvazvinoitika kune mamwe machengetedzo ane mashoma emari. Sezvauri kuona, zviri nyore kwazvo kuona iri boka revakuru veSpanish equities.
1 Bhuruu machipisi: hutungamiriri mukati meboka
2 Kugadzikana kwemutengo
3 Inoteverwa nevarevereri
4 Bhadhara chikamu chakakwira
5 Mazuva ekudyara
6 Zvakanakira sarudzo iyi
Bhuruu machipisi: hutungamiriri mukati meboka
Kusvikira makore mashoma apfuura, chikamu ichi chemusika wemari chakatungamirwa neTelefonica. Asi mumwedzi ichangopfuura pakave nekusiyana kusvika pakuva Inditex mukambani ine yakakwira kwazvo misika yemari kuSpain. Hazvishamise kuti kambani yakavambwa naAmancio Ortega yakakosheswa pamamirioni 91.380 emamiriyoni. Kuva imwe yembiru yekudyara, mukati nekunze kwemiganhu yedu. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti iyi kambani yemachira yakatsiva kambani yemafuta Repsol seimwe yemachipisi ebhuruu. Nekuti mablues ari kuvandudzwa nekuvandudzwa sezvakaitika nenhengo dzeIbex 35.
Kune rimwe divi, mamwe maitiro eaya anonzi maSpanish bhuruu machipisi kuvapo kwavo kwakasimba muEuropean equities. Kusvika pakuve nekubatanidzwa mune yayo inomiririra stock index senge iyo Eurostoxx 50 pamwe nemakambani akanyorwa zvakanakisa ekare kondinendi. Iwo hunhu hunomutsa kutarisisa, kwete chete kweavo vanoita mari mudzimba, asi nedzimwe nzvimbo dzehupfumi. Saka hazvishamise, nekudaro, kuti ivo chikamu chemapotifolio ekudyara anoitwa nemakambani akakosha kwazvo ekutonga pasi rose.
Asi kana aya akakosha akakosheswa nechimwe chinhu, imhaka yekuti anoratidza kugadzikana kukuru mukuumbwa kwemitengo yavo. Sezvinei, kusagadzikana kwayo hakusvike pamitezo yakanyanyisa, asi pane zvinopesana hapana misiyano yakanyanyisa pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi. Zvirinani panguva yechikamu chakanaka chemasangano ekutengesa. Nenzira iyi, mudyari mudiki nepakati anogona kuva nechokwadi chekuti mitengo yavo haizodzike muzviitiko zvisingafadze pamisika yemari.
Chimwe chinhu chekuwongorora mumabhuruu machipisi ndechekuti hadziratidze zvakakosha zvakasiyana zvine chekuita neyakaenzana masheya indices. Ndokunge, vanodzokorora izvi nekuteedzera kukuru. Saka kana iyo Ibex 35 ikakwira 1%, zvinoreva kuti hunhu uhwu huchafamba pasi pemahara akafanana mumitengo yakatarwa nemisika yemari. Iko hakuna mutsauko unooneka asi maitiro avo anogara achienda nemutsara mumwe chete. Ngazvive mumatanho ekumusoro senge mune ekudzika, pasina chero degree rekusiyiwa. Icho chinhu chinotsanangura zvirevo izvi uye zvaunogona kukurumidza kuona mumusika wemasheya.
Iwo anozivikanwawo nekuti iwo machengetedzo anoteverwa nevamiriri vezvemari kuti vavabatanidze mune yavo portfolio yekuchengetedzeka. Asi ivo zvakare vane kutevera yekuita kwavo pamusika wemasheya uye mutengo wakatarwa unopihwa kutungamira vanoita mari kuti vaite mashandiro avo. Nekudzokorora kwezvavaitarisira zvichibva pamhedzisiro yebhizinesi yakapihwa kota yega yega yegore. Imwe yemhedzisiro yezviito izvi ndeyekuti iwe uchagara uine ruzivo rwakawanda uchienzaniswa nezvimwe kuchengetedzeka zvisingaite ino kirabhu inosarudzika pamusika wemasheya
Uye zvakare, imwe yemabhenefiti akakosha epamusoro ebhuruu machipisi ndeyekuti ivo iripo mumari yekudyara zvichibva pamari dzeSpanish. Izvo hazvidikanwe kutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya, asi pane zvinopesana iwe unogona kugutsa ichi chishuwo kuburikidza neichi chigadzirwa chemari. Nekusiyana kukuru nekuumbwa pamwe chete nezvimwe zviwanikwa zvemari. Kwete chete kubva kuequity, asiwo kubva kune yakamisirwa mari kana kunyangwe kubva pane dzimwe sarudzo. Chinhu chisingaitike nekuchengetedzeka kwemvura kushoma.
Bhadhara chikamu chakakwira
Imwe yemipiro yezvivigiro inozivikanwa seyebhuruu machipisi ndeyekuti vanogovera chikamu chakakosha pakati pevachagovana navo. Uine yakagadziriswa uye yegore goho iwo ari pakati pe4% uye 6% angangoita. Kubudikidza nemubhadharo unogona kuve neakasiyana periodicity: gore rega kana semi-gore uye izvo zvichaenda kune yako yekutarisa account pamazuva aanoitwa anoshanda. Iri zano rakakosha kwazvo kugadzira mari yakatarwa mukati meiyo musiyano. Zvisinei nekushanduka kwayo mumisika yemari. Nekuda kweizvozvo, makambani ese aya anogadzira purofiti uye achigova pakati pevachagovana navo.
Machipisi ebhuruu emari inoshanduka ndeavo vanogovera uyu mubairo pamwe nerubatsiro rwakakura. Pamusoro pemamwe makambani akanyorwa akakosha zvakanyanya mune yakasarudzika index yeSpanish stock stock. Kusvika padanho rekuti kune vazhinji varimari vanoenda kune aya makosheni chete ekugovewa kweiyi bhonasi. Nekuti kuburikidza nazvo a bhegi rekuchengetedza inoitirwa iyo yepakati nepakati yakareba. Beyond dzimwe dzinotyisa nzira dzekudyara nzira. Mupfungwa iyi, zano iri rinogona kushandiswa kuendesa mizhinji inodzivirira mamodheru emari.
Unogona kusazviziva, asi idzi mhando dzehunhu dzinoshanda zvakanyanya mu mazwi akareba ekugara. Nekuti neiyi nzira, iwe uri muchinzvimbo chekutora zvinogona kuitika kuongororwa mumitengo yavo. Chero zvazvingaitika, izvo hazviratidzwe kuitira mashandiro ehunhu hwekufungidzira nekuti iwo kuchinja kwemitengo yavo hakuna kunyanyisa kukwirira. Sezvazviri mukati mekushanda kwemasikati kana chii chakafanana, chinoitwa muchikamu chimwe chete chekutengesa. Hazvishamise kuti iyo nguva yekugara iri zvakare danho kwauri kuti uwane contract mune iri rakakosha boka reSpanish equities.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti aya maitiro anowanzo kuve nemubhadharo kusimudzira a zvirokwazvo yakagadzikana saga bhegi. Kana iwe usiri kuda kushamisika kwakashata mumakore anouya, imwe yesarudzo dzakanakisa dzauinadzo kubva zvino zvichienda ndizvo zvimiro zvakasanganiswa mumabhuruu machipisi. Pamusoro pekugadzikana, vanokupa kudzoka kwakasarudzika gore rega rega. Chero zvazvingava, iri zano rakanakisa rekuvachengeta mupotifoliyo vasina kuwanda zvakanyanya. Mukufamba kwenguva iwe uchagara uchiwana kufarira pane yako mari.
Zvakanakira sarudzo iyi
Kana iwe ukasarudza chero eaya maitiro, iwe unofanirwa kuziva zvimwe zvezvipo izvo zvavanokupa iwe mune yako nzira yekudyara. Beyond performance yaunopedzisira wawana kubva pazvinzvimbo zvavo. Pakati pazvo zvinotevera kumira:
Inopa yakakura kugadzikana kuzvinzvimbo zvako seavhareji investor uye kure nekufungidzira mafambiro anotakura zvakanyanya njodzi.
Izvo ndezve tsika ne yakakura kudhara yeSpanish equities uye nekudaro hauzove nematambudziko ekuvhura zvigaro chero nguva.
Iwe hauzove nenjodzi semhedzisiro yekuwedzeredza volatility mukuumbwa kwemitengo yavo sezvo kuchinja kukuru mavari haisi imwe yemadinominesheni avo.
Iwo iwo hunhu huripo munzvimbo dzekudyara dzeakanyanya kukosha mari dzepasi rese, kunyangwe kubva pachinzvimbo chakakurumbira.
Mirira zvikamu zvine hungwaru mukati mehupfumi hwenyika kuburikidza zvizere zvakasimbiswa mabhizinesi mitsara uye nezvakanaka mune zvavo mhedzisiro.
Su kondirakiti vhoriyamu Iyo ndeimwe yepamusoro-soro mune yakasarudzika index yeSpanish equities, nekutengesa kwakanyanya kwezvivimbo muzvikamu zvese zvekutengesa.
Muzviitiko zvese vane kuita kunoshamisa na mugove, ine avhareji yekufarira yakatenderedza 5%, pamusoro pekubatsira kwemari yakatarwa.
Ivo havawanzo kuvapo profitability yakasimba kwazvo, asi kudzikira kwavo hakuna kutaurwa zvakanyanya pamusoro pemakore.
Ivo vanodzokorora mafambiro eakasiyana mareti indices, mune ino kesi mu Ibex 35 inova ndipo panosanganisirwa tsika idzi dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chinonzi bhuruu machipisi?
Chii chinonzi real estate kuwanda?